Tag: haptic mhinduro | Martech Zone
Tag: haptic mhinduro
Mugovera, Chivabvu 22, 2010 Mugovera, June 27, 2015 Douglas Karr
Kana iwe usati wanzwa nezve Haptic matekinoroji, iwe uchadaro. Anopfuura makore gumi apfuura, vaongorori veMIT vakatanga kugadzira zvishandiso zvinopa kukurudzira kwakananga kuti vanhu vanzwe zvinhu chaizvo. Mumakore gumi apfuura, iyo tekinoroji yatanga kuita nzira yayo pamatealscreen. Gore rakapera, Kunyudza kwakaratidza dhivhizheni yekubata kuCES iyo yakapa mhinduro haptic. Nokugadzirisa kuwanda uye kukurudzira kudzoka kuminwe yako, unokwanisa kubereka manzwiro aunowana riinhi